lundi, 31 octobre 2016 10:19
Ahoana ny fiforonan'ny harena ankibon'ny tany?
Malaza moa eto amintsika hoe misy harena maro be ankibon'ny tany, na dia tsy anazava lavitra be momba ny géologie aza isika fa fanazavana tsotsotra ihany ahafantarantsika ny fomba niforonan'izy ireny sy ny mety fomba amantarana ny toerana misy azy. Ity tanitsika ity dia boribory ohatran'ny baolina, ka eo amin'ny 35Km eo ny hatevenan'ny tany azotsika diavina, ary 6km eo kosa raha any anaty ranomasina. Mahatratra 2 900km any vao tratra ny ivon'ny tany.Arakaraky ny hidinana any ambanin'ny tany anefa dia mitombo ny hafanana ka mahatratra hatrany amin'ny 4 000°c ny hafanana any, ka mitsonika sy lasa tsiranoka mangotraka avokoa. Io tany diavintsika io izany dia mitsingevana sy miaina arakaraky ny fiboiboikan'ny ao ambany ao, mikisaka io tany io, na plaque tectonique, mety efa hitantsika angamba ireny sary Madagasikara teo aloha nitambatra tamin'ny Afrika sy Asie, fa dia nisaraka, dia isika lasa ilatongotra havia io.
mercredi, 26 octobre 2016 07:32
Fifidianana ny Filoha Amerikanina
Somary hafa kely tsy toa ny mahazatra ny fifidianana ny Filoha Amerikanina. Etats-Unis moa dia Repoblika Fédéraly nefa kosa régime présidentiel, izany hoe manandanja ny Filoham-pirenena. Misy Etat Fédéral 50 any Etats-Unis, izay isan'ny kintana 50 amin'ny Sainam-pirenendry zareo. Washington, District de Colombia, district fédéral hivelan'ireo 50 Etats ireo no Capitale Fédérale.9 833 517 km² ny velarataniny, izany hoe 17 avo eny amin'ny Madagasikara.320 206 000 no isan'ny mponina ny taona 2015 (15 avo eny noho ny isan'ny Malagasy) Président: Barack Obama, DémocrateVice-président: Joe Biden 4 taona ny mandat na ny faharetan'ny Filoha amin'ny toerany.(Mifanandrify amin'ny année bissextile), ary manomboka ny 20 janoary hatrany hatrany, taona maro nifandimby. Indroa misesy ihany ny Filoha amperin'asa no mahazo milatsaka.Tsy maintsy feno 35 taona izy, ary teraka tany Etats-Unis ka nonina nandritra ny 14 taona tany.